RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda Reading ee FA Cup – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda Reading ee FA Cup
Haaruun January 7, 2017
(Manchester) 07 Janaayo 2017 – Kooxda Manchester United ayaa mininkeeda Old Trafford maraqa uga cabtay Reading oo soo booqatay, waxaana ay uga adkaatay 4-0, iyadoo u soo gudubtay wareegga 4-aad ee FA Cup.
Afarta gool oo ay Man United kulankan ku adkaatay waa ay min labo gool u kala dhalisay labadii qeybood ee ciyaarta, waxaana min hal gool qeybtii hore u kala dhaliyey Wayne Rooney iyo Anthony Martial.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayey Man United ka heshay labada gool ee kale weeraryahankeeda da’da yar ee Marcus Rashford, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 4-0 ay ku adkaatay kooxda Jose Mourinho.
Haddaba halkaan hoose ka eeg RIKOODHADII laga diiwaan galiyey kulankan:-
>- Wayne Rooney ayaa barbareeyey rikoodhka xiddiga ugu goolasha badnaa taariikhda kooxda Manchester United ee Sir Bobby Charlton, waxaana labadan ciyaaryahan ay wada dhaliyeen ama ay wadaagaan min 249 gool tartammada oo dhan, Charlton ayaana goolashaas ku dhaliyey 758 kulan, halka Rooney uu 249 gool ku gaartay 543 kulan.
>- Marcus Rashford ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Man United tan iyo 24 bishii September, isagoo soo gabagabeeyey 17 kulan oo uu gool la’aan ahaa.
>- Kooxda Manchester United ayaa guul gaartay 8 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, waana markoodii ugu fiicnaa tan iyo bishii September 2009.
>- Marcus Rashford ayaa markiisii ugu horreysay kulan gudihiis labo gool u dhaliyey Man United tan iyo kulankii Arsenal ee uu labada gool ugu shubay kaasoo dhacay bishii Febraayo sanadkii 2016.
>- Kooxda Reading guushii ugu dambeysay oo ay Manchester United ka gaarto waxa uu ahaa kulan ka tirsan FA Cup ee dhacay sanadkii 1927-dii, waxa ay barbaro galeen labo kulan iyagoo guuldarro la kulmay lixda kulan oo kale, siddeedii kulan oo ay ciyaarteen tan iyo markaas.
>- Red Devils ayaa guuldarro la’aan ah 25-kii kulan ee ugu dambeeyay FA Cup ay la ciyaarto kooxaha heerka labaad, waxa ay guul gaartay 21 kulan, iyadoo barbaro gashay 4 kulan, guuldarradii ugu dambeysay ee ka soo gartay kooxaha heerka labaad waxay ahayd mar ay la ciyaartay kooxda Watford xilli ciyaareedkii 1981/82.
>- 15 kulan oo uu Michael Carrick xilli ciyaareedkan u ciyaaray Man United dhammaan tartammada lagama adkaan kooxdiisa, kaliyana waxa ay galeen labo barbaro.
Lewandowski oo iska diiday fursad uu ku noqon karay xidigga ugu mushaarka badan dunida!
MUUQAAL: Bal daawo tan qabsatay Wayne Rooney kulankii dhawaa ee Reading...(Mid u ciyaari jiray Man City ayaa u diiday Maaliyadiisa)